निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको ३० दिनसम्म पनि किन दोषी पत्ता लागेन ? सब भेटिएको घटनास्थलमा ‘सीधाकुरा-टिम’! – Tulsimedia
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको ३० दिनसम्म पनि किन दोषी पत्ता लागेन ? सब भेटिएको घटनास्थलमा ‘सीधाकुरा-टिम’!
कञ्चनपुर, ९ भदौ । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका २ स्थित खोल्टीकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएको आज ठीक ३० दिन वित्यो तर बलत्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीको पहिचान भने अहिलेसम्म भएको छैन । केन्द्रिय अनुशन्धान व्युरो र कञ्चनपुर प्रहरीले २५ औँ दिनमा घटनाको दोषी भएको आशंकामा स्थानीय दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले वास्तविक दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नक्कली पात्र खडा गरेको भन्दै अहिले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आन्दोलन चर्किएको छ ।
साउन १० गते २ किलोमीटरको दुरीमा साथी रोसनी बमको घरमा पढ्न गएकी निर्मल त्यसपछि घर फर्किनन् । भोलीपल्ट विहान उखुबारीमा क्षतविक्षत अवस्थामा मृत भेटिइन् ।
हामी निर्मलाको सब भेटिएको घटनास्थलमा पनि पुग्यौं । शबको अवस्ता हेर्दा नै बलत्कारपछि हत्या भएको देखिएपछि कञ्चनपुर प्रहरीसँगै केन्द्री अनुशन्धान व्युरोको टिमले घटनाको छानबिन सुरु ग¥यो ।
प्रहरीले घटनाको २४ औं दिनसम्म ३ जना व्यक्तिहरुलाइ्र्र अनुशन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिएपनि सामान्य सोधपुछपछि छोड्यो । र २५ औं दिनमा यस अघि ८ वर्ष जेल सजाय काटिसकेको दिलिपसिंह विष्टले निर्मलाको बलत्कार पछि हत्या गरेको अभियोग स्वकार गरेको भन्दै सार्वजनिक ग¥यो ।
२४ औँ दिनसम्म कोही व्यक्तिलाई जान नदिएको घटना स्थलमा कण्डम र विष्टले प्रयोग गर्ने कपडा भेटिएको भन्दै निर्मलका बाबु यज्ञराज पन्तलाई समेत बोलाएर देखायो । प्रहरी बिष्टलाई नै दोषी करार गरेर घटनालाइ्र्र टुङगाउने तर्फ अग्रसर भएको थियो । घटनास्थल देखेका यज्ञराज पन्तलाई प्रहरीले नाटकिय रुपमा बिष्टलाई दोषी करार गरी वास्तविक दोषीलाई छुटकार दिन लागि परेको भान भयो ।
उनलाई मात्रै होइन घटनालाई नजिकबाट नियालीरहेको कञ्चनपुरका स्थानीयलाई्र पनि । सोही कारण अर्को दिनबाट नेपाल प्र्रहरीको अनुशन्धान र प्रहरी अधिकारीहरु माथि नै शंकाको तिर तेर्सियो र आन्दोलन चर्कियो । २६ औं दिनबाट चर्किएको आन्दोलन अहिले दिन प्रति दिन बढ्दो छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी स्थानीय सनि खुन्हाको ज्यान गयो भने दर्जन बढी घाइते भएका छन् ।
प्रशासनले स्थिती नियन्त्रण लागि भन्दै करफ्यु लगाएको छ । यतिका दिनसम्म पनि निर्मल जसको घरमा पढ्न गएकी थिइन् त्यस घरको बारेमा भने प्रहरीले अनुसन्धानै नर्गनु, मानसिक अवस्था ठीक नभएका व्यक्तिलाई नाटकिय प्रमाण खडा गरी अपराधीकारुपमा सार्वजनिक गर्नु तथा प्रहरीले प्रशासनले प्रदर्शन माथी बल प्रयोग गर्नुले घटना झनै रहस्यम बन्दै गएको हो ।
कञ्चनपुरका ३ प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारवाहीको तयारी